Nissan Urvanတွင် ဆီစားသက်သာမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် မည့်သည့်အချိန်တွင် ဂီယာချိန်းရမည်ကိုအလိုအလျောက်ပြသပေးသည့် Shift-up indicator ပါဝင်သည့်အတွက် လောင်စာကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်သည်။
နစ်ဆန်း၏စီးနင်းသူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးနည်းပညာအယူအစသည်အန္ထရာယ်ရှိသောအနေအထားမှ စိတ်ချရသောမောင်းနှင်မှုအနေအထားသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်နှင့် ယာဉ်တိုက်မှုမှ ရှောင်လွှဲမရနိုင်တော့သည့် အခြေအနေမျီုးတွင် ထိခိုက်မှုအားအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် လျော့ချပေးသည်။.
SRS လေအိတ်များသည် ယာဉ်မောင်းနှင်သူနှင့် ရှေ့ခန်းတွင်စီးနင်းလိုက်ပါသူများအတွက် ယာဉ်တိုက်ရာမှဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆောင့်အားကြောင့် ဒဏ်ရာရနိုင်မှုအားလျော့ချပေးသည်။.
ABS နှင့် ဘရိတ်အကူအညီစနစ်
အရေးပေါ်ဘရိတ်နင်းလိုက်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ဘီးချော်မသွားစေရန်ကာကွယ်ပေးသည်။ ဘရိတ်အကူအညီစနစ်သည် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အလုံးစုံဘရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုမြှင့်တင်ပေးသည်။.
NV 350 Urvanတွင် ဆီစားသက်သာသောဒီဇယ်နှင့် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များ ပါဝင်ပြီး၎င်းတို့သည် ပြီးပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အထူးသဖြင်ညက်ညောပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောစီးနင်းမှုကိုပေးစွမ်းကာယာဉ်ပေါ်တွင် ရှိသူအားလုံးမှ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှုကိုခံစားမိစေသည်။.
၂.၅ လီတာဒီဇယ်အင်ဂျင် YD25DDTi
အင်ဂျင်အအေးပေးစက် ပါဝင်သော YD 25 DDTI တာဘိုဒီဇယ်အင်ဂျင်သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရှိန်နှင့် ဆီစားသက်သာမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည့် ထိပ်တန်းအင်ဂျင်စွမ်းအားကိုပေးစွမ်းသည်။ RPM 1400 မှ 2000 အတွင်းအမြင့်ဆုံးအင်ဂျင်လိမ်အား 356 NM ကိုပေးစွမ်းနိုင်သဖြင့် ပိုမိုနည်းပါးသော RPM တွင်အမြင့်ဆုံးအင်ဂျင်လိမ်အားကိုပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
၅၀၀ မီလီလီတာ အအေးဘူး သို့ ရေဘူးနှစ်ဘူးအထိ ထည့်နိုင်ပြီး အဲယာကွန်း လေထွက်ပေါက်များမှတဆင့် ၎င်းတို့ကိုအအေးခံထားနိုင်သည်။.
ခရီးသည်များအနေဖြင့် မည်သည့်နေရာတွင်ထိုင်သည်ဖြစ်စေဒူးခေါင်းမလွတ်မှာစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲသက်တောင့်သက်သာဖြင့် ထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Nissan Urvan၏မော်ဒယ်လ်အသစ် ပိုမိုကျယ်ဝန်းရှည်လျားသည့် Wide Long Body တွင် ပိုမိုကျယ်ဝန်းသည့် ထိုင်ခုံများပါရှိပြီးပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေမည်ဖြစ်သည်။.
Nissan Urvanတွင် ခရီးစဉ်တိုင်းအတွက် ခရီးသည်များသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် လေအေးထုတ်ပေးနိုင်သည့် လုံလောက်သော လေထွက်ပေါက်များပါဝင်သည်။.